Sababta sidas loo yeelay ayaa lagu macneeyey 'si hilibka idahaasi u noqdo mid aan cunitaankiisu ku haboonayn Muslimiinta'
Tarjumadii: SomaliTalk.com | Nov 24, 2004
Isha: warbaahinta Australia
Ido tiradoodu dhantahay 70,000 oo sabtidii iyo Axadii loo soo rari lahaa Bariga dhexe ayaa la joojiyey kaddib markii la xaqiijiyey in meeshii lagu quudinayey loogu daray hilib khaansiir. Waxaa taas ka horeeyey ido tiradoodu dhamayd 50,000 kuwaas oo qabey cudur xoolaha ka gala afka, waxaana kuwaas markii dambe lacag la'aan lagu siiyey Eriteria kaddib markii ay diideen 25 dal.
Ralph Hahnheuser oo ah af-hayeenka kooxda lagu magcaabo 'xoraynta xayawaanka' ee Australaia, waxa uu kamid ahaa dadkii sheegtay in ay ka dambeeyeen in ay idaha la dhoofin lahaa wixii lagu quudinayey ugu dareen hilib doofaar.
Dhammaan warbaahinta dalka Australia ayaa ilaa Arbacadii lasoo dhaafay hadal hayey warar kusaabsan ido loo dhoofin lahaa dalalka carabta oo laga joojiyey raritaankii kaddib markii ay koox lagu magcaabo 'xoraynta xayawaanka' ay shaaca ka qaadeen in ay xoolahaas wixii lagu quudinayey ugu dareen hilib doofaar. Kooxdaas oo isku magacawday 'xoraynta xayawaanka' waxay kasoo hor jeedaan in xoolaha nool laga dhoofiyo dalka Australia.
Xoolahaas waxa laga dhoofin lahaa dekedda magaalada Portland ee ka tirsan gobolka Victoria.
Arbacadii iyo khamiistii lasoo dhaafay ayey ahayd markii ay baaritaanka sameeyeen qaybta Australia u qaabilsan xanaanada xoolaha kaddib markii ay soo shaac baxday in habeenimadii Talaada ay kooxdaasi xoolaha meeshii lagu quudinayey iyo biyihii la siinayey ugu dareen hilibka doofaarka.
Arintaas waxaa ka hadlay xubno katirsan baarlamaanka Australia kuwaas oo ku tilmaamay 'argagixiso aan hub haysan'.
Khasaaraha dhaqaale ee arintani u keeni karto Australia ayaa lagu qiyaasay $1 billion oo ah dakhli soo geli lahaa oo lumaya.
Sida ay qortay jariidad kasoo baxda dalka Sacuudiga ee lagu magcaabo Saudi Gazette, caddadkeedii shalay (Nov 23, 2003), khasaarahan hadda lasoo gudboonaadey Austarlia waxaa ka horeeyey khasaare kale oo ahaa kaddib markii ido dhan 50,000 ay ku xanibnaayeen baddaha kuwaas ay diideen Sacuudiga iyo 25 dal, sababtoo ah ayadoo la sheegay in xoolahaasi ay jiranaayeen. Ugu dambayntii xoolahaas waxaa dib u iibsatey dawlada Australia ayadoo kabixisay $2.9 million, ugu dambayntiina waxaa xoolahaas siisay wadanka ku yaal Afrikada Bari ee Eritrea, taas oo markaas Eritrea lagu siiyey lacag la'aan. Ganacsi ahaan idahaasi waxay ku fadhiyeen qiime dhan $660 million oo laga heli lahaa marka si toos ah loo dhoofiyo, iyo in uu shaqaalaysiin lahaayeen 9,000 oo qof.
Arintan ay xustay jariidada SaudiGazette waxa ay ka bilaabatay August 20, 2003 kaddib markii ay Sacuudigu diideen in markabka laga soo dejiyo ido gaarayey 50,000 kuwaas oo saarnaa markab lagu magcaabo Cormo Express, sababta ay Sacuudu u diideena waxay ahayd markii ay dhakhaatiirta xanaanada xooluha ee Sacuudigu sheegeen in boqolkoba lix kamid ah idahaa ay qabaan cudur xoolaha ka gala afka oo luqada ingiriiska lagu yiraahdo "scabby mouth disease". Markii ay xoolahaasi badda saarnaayeen 79 maalmood oo ay diideen ilaa 25 dal, isla markaasnaa ay dood kulul ka dhacday dalka Australia oo lagu dooday in aan xoolahaas dalka lagu soo celin, haddii lagu soo celiyona la qowraco dhammaantood, ayaa markii dambe lacag la'aan waxaa ku qaatay dalka Eriteria. Markabkiina wuxuu Australia ku laabtay bishan November 15keedii, markii uu Markabku Austarlia gaareyna waxaa baaritaan lagu sameeyey dadkii shaqaalaha ka ahaa. [ Eeg halkan]. (Arinta aysan dadka dega Bariga Afrika isweydiin waxay tahay raad intee le'eg ayaa idahaas cudurka qaba ee ay lacag a'aanta ku qaadatay Eritaria ku reebi doonaan dhaqaalaha dalalka geeska afrika iyo caafimaadka dadka iyo duunyada geyigaas ku dhaqan, mase keeni doonaan cuduro aan laga aqoon Bariga Afrika, sideese hadda arintaas looga hor tegi karaa.)
Aan dib ugu laabano arinta cusub ee xoolaha lagu quudiyey doofaarka'e, Sida ay sheegtay shabakada Herald Sun oo kasoo baxda dalka Australia cadadkeedii maanta (Nov 24, 2003), Saraakiil ka tirsan dawladda Australia waxay xaqiijiyeen in ay run tahay sheegashadii ay dadka xoolaha u dooda sheegteen in hilib doofaar oo la shiidey ay ku dareen meeshii lagu quudinayey idaha lagu rari lahaa markabka usii jeedey Bariga dhexe. Tijaabooyin la sameeyey ayaa lagu ogaadey in waxa xoolaha quudiska loogu daray uu ahaa hilib khaansiir.
Dadka xoolaha nool u dooda waxay ku andacoonayaan in sababta ay idaha u siiyeen khaansiirka in ay tahay si ay u noqdaan kuwo aan cunidoodu ku haboonayn dadka Muslimiinta ah.
Idihii waxay weli kujiraan meesha xoolaha lagu xanaaneeyo inta aan la dhoofin, markabkii qaadi lahaana wuxuu weli taagan yahay meel ka durugsan xeebta. Markabkaas oo lagu magcaabo Al Shuwaikh, waxa uu idaha u qaadi lahaa Bahrain, Kuwait iyo United Arab Emirates.
Khamiistii ayaa dembi lagu soo oogey nin lagu magcaabo Ralph Hahnheusser, oo 40 jir ah, oo kamid ah kooxda 'xoraynta xayawaanka' oo ah kooxda sheegatay in ay ka dambeeyeen falkaan, waxaana lasoo daayey kaddib markii uu xabsiga ku baryey habeenkii khamsta kaddib markii laga dhigay lacag dhan $4000 oo ah damaanad, waxaana lagu xukumay in uusan 500 mitir usoo dhaafi karin dekedda Portland iyo in uusan hal kiilomitir usoo dhaafi karin meesha lagu quudiyo xoolaha la dhoofinayo. Waxana uu Mr Hahnheusser u ballansan yahay in maxamada Portland lasoo taago January 7, 2004.
Sharciga gobolka Victoria waxa uu qabaa in qofkii xoolaha ku quudiya wax kasoo baxa xayawaan kale in la ganaaxo $24,000 ama laba sano oo xarig ah.
Sida ay werisey jariidada Standard, Australia, Ralph Hahnheusser waxa uu yiri "Qorshaha weerarkaasi u dhacay ka qoomamayn meyno, ismana dhiibeyno, xaaladda kor ayaan kalal socon doonaa, waana qeyru mas'uul xumo in xoolahaas loo dhoofiyo Bariga Dhexe".
Wixii warkaan kusoo kordha ka akhri halkan...
Sawirka: Spec news.
Minnesota oo Lag Ciidi Doono Talaada, Nov 25
Waxaana salaadda ciida lagu tukan doonaa... Guji